I-Berlin Radio Show inikeza i-HAVEN: i-90 yePop yeNkcubeko · Oyoun | Inkcubeko yokucinga kwakhona
Umboniso weRadio waseBerlin uhambisa i-HAVEN: i-90s Pop yeNkcubeko
Nge-Okthobha 30, 2021 18:00 PM - 23: 00
« Umnyhadala woMculo oMangalisayo
Iqela laseQueerberg Soli-Isikhumbuzo sonyaka we-3 kunye nabo bonke abadlali beembacu zeenkwenkwezi »
I-TBRS inikezela nge-HAVEN: 90s Pop of Culture Halloween Special
>> Ukubonisa ukusebenza komculo kunye nomculo! Hip Hop, RnB, Soul, Afrohouse, Afrobeats nokunye okuninzi ... <
Le Halloween ihlala kwaye iphuma ngqo e-Oyoun, yiza unxibe njengophawu lwakho oluthandayo lwe-90s kwaye ubukele owona mboniso ushushu ophilayo ongazange ucinge ukuba uyawudinga kule mpelaveki yeHalloween! Yiza uzonwabele umboniso weqonga kaGianni Mae, uMculo oBomvu, u-Aka Kelzz noKal L. Ukusuka kwiKlabishi yePatch ukuya kwiNdoda ebalekayo, HAVEN uya kuba nokudanisa kwezinye zezona ziqhushumbisi zikhulu zisusela kwiminyaka engama-90 eyadlulayo kunye nabadlali beklabhu abatsha namhlanje! Ezona zibalaseleyo kunye nezona zibalaseleyo zokuyila ezingama-90s zinokuphumelela amabhaso ekupheleni kobusuku! Awufuni kuphoswa yile nto!
→ Nge-30 ka-Okthobha ka-2021 e-Oyoun
→ Amasango avulwa ngo-18: 00 PM
→ Amatikiti ayi-12 € kodwa iminikelo YAMkelwe KAKHULU!
→ Fumana itikiti lakho kwi-Eventbrite >>> qhagamshela apha
UGianni Mae IG: @iamfanlalisa
UKal L. IG: @ kal2l
AKA Kelzz IG: @akakelzzmusic
Umculo obomvu IG: @thatredmusic
Umboniso kanomathotholo waseBerlin (TBRS):
Bangumboniso kanomathotholo osekwe eBerlin ojolise ekuqaqambiseni i-Hip Hop, i-RnB, i-Afrobeats, i-Afrohouse, iReggae, i-Dancehall kunye nabaculi boMoya be-diaspora ngeengxoxo kunye neengxoxo. Injongo kudliwano-ndlebe negcisa ngalinye malunga neminqweno yabo, iimpembelelo, imvelaphi, iminqweno, kunye nokunye. Benza oku ngenjongo epheleleyo yokubonelela ngeqonga lamagcisa kunye nabaphulaphuli babo ukuba banxibelelane kwinqanaba elinzulu nangakumbi lomntu. I-TBRS iveza i-HAVEN, njengoko igama layo lisitsho, yindawo ekhuselekileyo yamagcisa ukubonisa izakhono kunye neetalente zabo kwinqanaba labaphulaphuli abasondeleyo nabanamandla. Iqonga eli lijolise ekunikezeleni amagcisa ngamathuba amaninzi okufumana ukubambeka kwasekhaya nakwamanye amazwe ngokwabo nangomculo wabo, kunye nokuhlawulwa ngexesha labo.
Yabelana kwaye uxhase amagcisa akho asekuhlaleni kunye nabayili!
IG: @lungelo_lungelo - @lungelo_lungelo
Youtube: Iithoni zeMelanin TV
Nceda uqaphele: 2G ISIGANEKO! Ukuthatha inxaxheba kwesi siganeko e-Oyoun, kufuneka ube nobungqina bokugonywa / ukuchacha. Iimaski ze-FFP2 zinyanzelekile e-Oyoun kude kube kukwazisa esinye. Ulwazi olongezelelweyo malunga nombono wethu wococeko lunokufumaneka Apha.
IHAVEN, Umboniso weRadiyo waseBerlin